Isexwayiso: Ukusetshenziswa kwe-AFF_LINK engacacisiwe engaguquki - kucatshangwa ukuthi 'AFF_LINK' (lokhu kuzophonsa Iphutha enguqulweni yesikhathi esizayo ye-PHP) /media/actualidadgadget.com/website/wp-content/plugins/abn-appstore/definitions.php on line 22
Ungasebenza kanjani ngamafayela e-PDF ku-Microsoft Edge Chromium | Izindaba zamagajethi
U-Ignacio Sala | | Izifundiswa, Windows
Njengoba iMicrosoft imemezele ukuthi isebenza kunguqulo entsha yesiphequluli sayo se-Edge, ye Windows 10 futhi isuselwa kuChromium (injini efanayo etholakala kuGoogle Chrome), abasebenzisi abaningi ngizimisele ukuyizama kabusha kwisiphequluli somdabu seWindows 10, ithuba abalisebenzise ngokugcwele futhi selivele labavumela ukuthi baphinde bathole isabelo semakethe.
Ngaphambi kokukhishwa kwenguqulo yokugcina yeMicrosoft Edge eseChromium, isabelo semakethe sika-Edge sasingu-3%. Ezinyangeni ezimbili ngemuva kokwethulwa kwayo, isivele iku-5%, yize kusekude ekubuseni kwe-Chrome, ngesabelo semakethe esingu-67%. I-Edge entsha akuyona nje esheshayo futhi isebenzisa izinsiza ezingaphansi kakhulu kuqhathaniswa nenguqulo yangaphambilini, kepha futhi, iyahambisana nesandiso ngasinye se-Chrome.
Uma usebenzisa njalo i-Chrome ngenxa yamathuba angenamkhawulo anikezwa izandiso zayo, unga yenza ushintsho kusuka kwesinye isiphequluli uye kwesinye ngaphandle kwenkinga. Ukufakwa ku-Windows 10, kwenza ukusebenza kube okuphelele, okungcono kakhulu kunalokho okunikezwa yi-Chrome, isiphequluli ebesisolwa ngaso sonke isikhathi (futhi kufanele) ngokuthi sidle izinsiza kunoma yiluphi uhlelo olusebenzayo (yize ku-macOS kuyinto encane elula).
I-Windows 10 ayigxilile kuphela kumakhompyutha wedeskithophu, kodwa futhi iyahambisana namakhompyutha wesikrini sokuthinta, njengobubanzi beMicrosoft's Surface, ububanzi obunikeza ukungaguquguquki kokuba nesistimu yokusebenza yedeskithophu kuthebhulethi, ithebhulethi eba ikhompyutha ngokushesha lapho sidinga ukufaka ikhibhodi.
Abasebenzisi abaningi bachitha amahora amaningi kusiphequluli, isiphequluli esingagcini nje ngokufinyelela ezithombeni, kumavidiyo, kulwazi nganoma yiluphi uhlobo ... kodwa futhi isibe yithuluzi lokusebenza ezinkampanini eziningi zishiya eceleni izicelo zazo ezazisetshenziswa esikhathini esedlule.
1 Vula bese uhlela amafayela ngefomethi ye-PDF
1.1 Gcwalisa amafomu e-PDF
1.2 Gqamisa / dwebela umbhalo bese uchaze
1.3 Funda umbhalo
1.4 Zungezisa idokhumenti
1.5 Gcina konke ukulungiswa
2 Yini esingakwazi ukuyenza ngeMicrosoft Edge kumafayili e-PDF
3 Ungayilanda kanjani iMicrosoft Edge Chromium
Vula bese uhlela amafayela ngefomethi ye-PDF
Amafayela e-PDF yifomethi esetshenziswa kakhulu namuhla yokwabelana ngemibhalo, esidlangalaleni noma eyimfihlo, ngenxa yezici ezahlukahlukene le fomu esinikeza zona. Kubukeka sengathi iMicrosoft ukuphela komkhiqizi obonile ukuthi cishe bayahambisana futhi kusukela kunguqulo yokuqala ye-Edge, ingeze amandla okuvula nokusebenza nemibhalo ekule fomethi. Eqinisweni, uma ungenalo uhlelo lokusebenza olusekela amafayela ngefomethi ye-PDF, iMicrosoft Edge izophatha ukuwavula. Yini esingayenza ngamafayela we-Microsoft Edge ne-PDF?
Gcwalisa amafomu e-PDF
Emakethe singathola inqwaba yezicelo ezisivumela ukuthi sisebenze ngefomethi ye-PDF, iningi lazo elikhokhelwayo, yize izidingo zethu zincane, njengokukwazi gcwalisa idokhumenti elula esemthethweni ukuze ukwazi ukuyiphrinta ngokuhamba kwesikhathi noma wabelane ngayo.
NgeMicrosoft Edge singagcwalisa noma yiluphi uhlobo lwedokhumenti yomphakathi noma eyimfihlo efomethwe phambilini ukukhombisa izinkambu okufanele sizigcwalise (wonke umphakathi unazo), esivumela ukuthi sigcwalise imibhalo zithumele ngocingo ngaphandle kokuthi uskene, uprinte futhi uwathumele ngeposi noma uwethule ngokomzimba.
Gqamisa / dwebela umbhalo bese uchaze
Lapho ufunda noma ufunda ngokucophelela idokhumenti ngale ndlela, kungenzeka ukuthi sinesifiso sokugqamisa yiziphi izingxenye zayo ezibaluleke kakhulu, kungaba ukugqamisa ingxenye yombhalo noma ukwenza izichasiselo ngesandla. I-Edge entsha, njengaleyo eyedlule, futhi iyasivumela ukuthi sikwenze yomibili le misebenzi, yize ukwenza izichasiselo, kufanele sibe ne-pulse enhle kakhulu negundane noma sisebenzise ipeni ngqo esikrinini sokuthinta sedivayisi uma sinayo.
Gqamisa umbhalo Kulula njengokukhetha ngaphambilini umbhalo esifuna ukuwugqamisa, ngokuchofoza kwesokudla nangaphakathi kwemenyu yokugqamisa, ukukhetha umbhalo esifuna ukuwusebenzisa. I-Edge isinikeza imibala emine ehlukene: ophuzi, oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza okotshani nokubomvu, imibala esingayisebenzisa ngokushintshanisa ukuhlanganisa izigaba nezihloko ezahlukahlukene kudokhumenti.
Enye into ethokozisayo u-Edge asinikeza yona kungenzeka funda umbhalo ngokuzwakalayo ngokusebenzisa iwizard esinayo kukhompyutha yethu, esivumela ukuthi senze ezinye izinto ngenkathi silalele idokhumenti esikhundleni sokuyifunda. Ukusizakala ngalo msebenzi, kufanele nje sikhethe umbhalo, cindezela inkinobho yegundane kwesokudla bese ukhetha iZwi.
Impela izikhathi ezingaphezu kwesisodwa uthole idokhumenti ngefomethi ye-PDF leyo ayiqondisiwe kahle, okusiphoqa ukuthi siphendukise idokhumenti ngohlelo lomuntu wesithathu ukuze sikwazi ukuyifunda kahle uma singafuni ukuguqula umonitha noma ikhanda. Ngenxa ye-Edge, lo msebenzi uyatholakala, umsebenzi osivumela ukuthi sijike ngokuhamba kwewashi noma ngokuphikisana newashi.
Gcina konke ukulungiswa
Lapho sesenze lonke ushintsho i-Edge esinikeza lona kumadokhumenti ngefomethi ye-PDF, singakwazi gcina izinguquko kuyo, kungaba kumbhalo ofanayo kwikhophi yawo. Izinguquko zizogcinwa kufayela futhi zizotholakala kuwo wonke umuntu ovula idokhumenti, kungakhathalekile ukuthi yiluphi uhlelo abalusebenzisayo.
Yini esingakwazi ukuyenza ngeMicrosoft Edge kumafayili e-PDF
Okwamanje, asithembe ukuthi ezinhlotsheni ezizayo izosetshenziswa, kungenzeka imibhalo yezimpawu ukungeza isiginesha ebesiyigcine phambilini kwikhompyutha yethu, umsebenzi oya ngokuya ujwayeleka ikakhulukazi ezimeni zebhizinisi lapho usayina izinkontileka zokuqashwa noma yiluphi uhlobo lombhalo.
Ungayilanda kanjani iMicrosoft Edge Chromium
Uma ungakanikezi inguqulo entsha ye-Chromium ye-Edge, usuyayithatha. Uma uvuselele iWindows 10 enguqulweni yakamuva, kungenzeka ukuthi usuvele uyifakile kwikhompyutha yakho futhi ubone intuthuko enkulu ekusebenzeni kwayo. Uma lokhu kungenjalo, ungaya ngqo kufayela le- Iwebhusayithi ye-Microsoft bese ulanda le nguqulo entsha ngokususelwa ku-Chromium, version itholakalela iWindows ne-MacOS.
IMicrosoft Edge Chromium ayihambisani kuphela neWindows 10 ne-macOS, kepha futhi, futhi isebenza ku-Windows 7, Windows 8 naku-Windows 8.1. Kukhona futhi uhlobo lwe-iOS ne-Android olutholakalayo futhi ngenxa yokuvumelanisa amabhukumaka nomlando, singakwazi ukufinyelela kwimininingwane efanayo esiyigcine kukhompyutha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izifundiswa » Ungasebenza kanjani ngamafayela e-PDF ku-Microsoft Edge Chromium